आजबाट बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्यो ! बिहानको ६:२८ यी राशिहरुको शुभ समय शुरु भयो ! - Daily Lokmandu
Homeराशिफलआजबाट बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्यो ! बिहानको ६:२८ यी राशिहरुको शुभ समय शुरु भयो !
आजबाट बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्यो ! बिहानको ६:२८ यी राशिहरुको शुभ समय शुरु भयो !
August 10, 2018 राशिफल Comments Off on आजबाट बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्यो ! बिहानको ६:२८ यी राशिहरुको शुभ समय शुरु भयो !
ज्योतिष शास्त्र अनुसार बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दै छ। २५ जून २०१८ (सोमवार)को दिन बिहानको ६:२८ मा बुध ग्रह मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा गोचर हुनेछ। बुध ग्रह कर्कट राशिमा २ सेप्तेम्बेर २०१८ बिहान ९:२८ सम्म कर्कट राशिमानै रहनेछ। या एस्स्राशी परिवर्तनले केहि राशि भएका व्यक्तिहरुलाई धेरै शुभ लाभ मिल्न सक्छ भने कुनै राशिलाई भने धेरै संकट समेत आइलाग्न सक्छ। कुन राशिलाई कस्तो असर पर्छ हेर्नुहोस् !
यस राशि हुनेहरुको कुण्डलीको चौथो भावमा बुध रहने हुँदा यस राशि भएका व्याक्तिहरुलाई लाभ मिल्ने गर्छ। यस गोचरको पुरा अवधिमा पारिवारिक जीवनमा उन्नति रहने देखिन्छ भने परिवारमा भएका सम्पूर्ण समस्या दुर भएर जान सक्ला। मिहिनेत शुभ परिणामदायक सावित रहन सक्ला। तर आफ्नो माता-पिताको स्वास्थ्यमा भने केहि नकारात्मक असर देखा पर्न सक्छ।
यस राशिको तेस्रो भावमा बुध ग्रह रहने हुँदा यस राशि भएका व्यक्तिहरुको सम्पूर्ण उद्देश्य प्राप्त हुने देखिन्छ। दृड भएर गरेका सम्पूर्ण कार्य सफल गराउनमा पनि बुध ग्रहको हात हुन सक्ला। आर्थिक स्थिति मजबूत बन्दै आफन्तजनसँगको सम्बन्ध समेत बलियो भएर जान सक्ला। जीवनशैलीमा समेत धेरै शुभ बदलाव आउनाले सामाजिक सम्मान समेत प्राप्त हुन सक्ला।
यस राशि हुनेहरुको दोस्रो भावमा बुध ग्रह रहने हुँदा बोलीमा अत्याधिक मधुरता रहनाले सम्पूर्ण कार्य सफल हुन सक्ला। स्वस्थ्यको मामला भने हदै सम्मको संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ भने बुध ग्रहको राशि परिवर्तनले विदेश यात्रा सफल बनाउने देखिन्छ। प्रेम जीवनमा धेरै लाभ मिल्नाले दैनिकीमा समेत प्रतक्ष लाभ मिल्न सक्छ।
बुध ग्रह यस राशिको पहिलो भावमा रहने हुँदा यस राशि हुने हरुलाई मध्यम फलदायी रहन सक्ला। स्वास्थ्य सामान्य रहने भएका कारण खान-पानमा लापरवाही नगरेकै उचित रहने देखिन्छ। सोचेको व्यक्तिसंगको सम्बन्ध खासै राम्रो नरहने हुँदा सम्बन्धको मामलामा केहि हदको संयमता अपनाउनु भएमा शुभ रहने देखिन्छ। आर्थिक मामलामा भने सोचेको जस्तै लाभ मिल्न सक्ला।
यस राशि हुनेहरुको १२ औं भावमा बुध ग्रह रहने हुँदा खर्च अत्याधिक भएका जान सक्ला। खर्चमा नियन्त्रण नराखेमा ठुलै आर्थिक संकटको समेत सामना हुने देखिन्छ। कुनै पनि सानो कुरालाई लिएर विवाद हुँदा दैनिक कार्य समेत प्रभावित हुने देखिन्छ। यस गोचरसँगै सिंह राशि हुनेहरुको वैदेशिक यात्राको मामलामा भने राम्रै संयोग बन्न सक्ला।
यस राशि हुनेहरुको कुण्डलीमा ११ औं भावमा रहने हुँदा यस राशि हुनेहरुलाई सामाजिक दायरामा वृद्धि हुने हुँदा विशेषतः सामाजिक लाभ मिल्न सक्ला। साथै बौद्धिक लाभ समेत मिल्नाले खुशी प्राप्त हुन सक्ला। कन्या राशि हुनेहरुको संवाद शैलीका कारण धेरै व्यक्ति प्रभावित हुने देखिन्छ भने कानुनी रुपमा पनि सफलता दिलाउन राशि परिवर्तनले भूमिका खेल्न सक्ला।
यस राशिको १० औं भावमा बुध ग्रह रहने हुँदा निजी र प्रोफेशनल जीवनमा लाभ मिल्ने देखिन्छ। आर्थिक मामलामा मात्र नभई सामाजिक साथी पारिवारिक जीवनमा समेत बुध ग्रहको राशि परिवर्तनले खुसियाली दिलाउन सक्ला। कुनै पनि प्रकारको दिर्घकालिन योजना बनाउनको लागि पनि यस राशि परिवर्तन लाभदायक रहन सक्ला। आफन्तजनबाट नसोचिएको उपहार समेत मिल्न सक्ला।
यस राशिको ९ औं भावमा बुध ग्रह रहने हुँदा स्वास्थ्यमा शुभ असर पर्न सक्ला। धेरै समय देखि भएको स्वास्थ्य समस्या दुर हुने देखिन्छ। तर पारिवारिक जीवनमा भने यस राशि परिवर्तनले नकारात्मक असर देखाउने देखिन्छ। यत्र गर्नको लागि समेत यस राशि परिवर्तनका कारण रोकावट आउने देखिन्छ। आयमा अप्रत्याशित कमि आउनाले मानसिक तनाव भने बढेर जाने देखिन्छ।
यस राशिको ८ औं भावमा बुध ग्रह रहने हुँदा बोलीमा नियन्त्रण राख्नु उचित हुने देखिन्छ। बोलिका कारण लज्जित साथै आलोचित हुनु पर्नाले मानसिक तनाव बढाउने देखिन्छ। मिश्रित फल मिल्नाले भने केहि राहत मिल्न सक्ला। आर्थिक मामलामा सामान्य लाभ मिल्न सक्ला भने व्यवसायिक यात्रा सफल हुन सक्ला। प्रेम सम्बन्धको विषयमा भने हदै सम्मको सावधानी अपनाउनु पर्न सक्ला।
यस राशिको सप्तमी भावमा बुध ग्रह रहने हुँदा यस राशि हुनेहरुलाई करियरसँग सम्बन्धित लाभ मिल्न सक्ला। भविष्यसँग जोडिएका कार्यमा अधिक लाभ मिल्न सक्ला भने दिर्घकालिन योजनामा नयाँपन थप्नको लागि सहयोग परिवार साथै आफन्तबाट भने जस्तै सहयोग मिल्न सक्ला। तर प्रेमी साथै जीवनसाथीसंगको सम्बन्धमा भने दररता भने देखा पर्न सक्ला।
यस राशिको छैटौं भावमा बुध ग्रह रहने हुँदा खर्चमा धेरैनै वृद्धि हुन सक्ला साथै समयमा खर्च नियन्त्रण गर्न असमर्थ भएमा ठुलै आर्थिक संकट समेत आइपर्ने देखिन्छ। यस राशि परिवर्तनले भने कानुनी रुपमा रहेका समस्या भने दुर गराउनको लागि धेरनै सहयोग मिल्ने देखिन्छ। साथै क्रोधमा अत्याधिक वृद्धि हुनाले बन्न लागेको कार्यमा समेत नराम्रो असर गर्न सक्ला।
यस राशिको पाँचौ भावमा बुध ग्रह रहने हुँदा प्रेम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्ला भने सम्बन्धहरु टुट्ने धेरै सम्भावना बन्न सक्ला। तर अध्ययनको शिलशिला भने सफलता हासिल हुने देखिन्छ। ज्ञान प्राप्ति विषयमा भनेको जस्तै सुधार हुनाले कलाको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त दिलाउन यस राशि परिवर्तन सफल हुने देखिन्छ। यदि यस राशि हुनेहरुले बोलीमा मात्रै केहि नियन्त्रण राखेमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा लाभ मिल्न सक्ला।
अब पाठेघर क्यान्सरको उपचार नेपालमै सहज बन्दै : डा. रंगिना शाह (भिडियाे)
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुन्छ रे ! तपाई पनि यो भिडियो हेर्नुस अनि शेयर गर्नुस !! (1,303)
यो भिडियो हेरेपछि कसको आखामा आसु आउदैन होला (भिडियो सहित) (1,279)
पोखराका इञ्जिनियर सन्दीप गुरुङ विश्वमै प्रथम ! सम्मान स्वरूप लाइक, कमेन्ट र सेयर गरौं (1,147)
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ २ गते बुधबारको… (1,107)
‘नेपालमै खनिखोस्री गरी खाउ, मलेसिया नआउ’…सक्दो शेयर गरौ (1,000)
२०७६ को पात्रो माघ १५ गतेभित्र बजारमा आउदै, बिदा बारे यस्तो छ निर्णय (617)
३३ काेटी देउताकाे दर्शन गरेर भेटी स्वरुप एक एक शेयर गर्दै बि.सं. २०७५ माघ महिनाको [मासिक… (601)
Wow…हात खुट्टा गुमाएका कृष्णको ‘राधा’ बनेर आईन रुकुमकी रुपा ! सबैलाइ प्रेरणा मिलोस… (13,047)
निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण ! निर्मलाको बुवा माथि शंका ! किन मान्दैनन् रगत दिन ? खास कारण… (10,484)